काखीमा पसिना आएका कारण लज्जित हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् छुटकारा - Khabar Nepali
होमपेज / स्वस्थ्य / काखीमा पसिना आएका कारण लज्जित हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् छुटकारा
एउटा सेतो सर्ट लगाएर निस्किएको मान्छे साँझ घर आउँदा अन्यत्र फोहोर भए पनि नभएपनि काखीमा भने फरक रंगको फोहोर पक्कै पनि देखिन्छ।कतिपयको काखीमा रौं हुन्छ, त्यसले झनै धेरै पसिना सिर्जना गरेर काखीलाई फोहोर गर्न सक्छ। कतिपयको काखीमा अनावश्यक कालो दाग लागेको देखिन्छ।
यसले ब्याक्टेरियालाई मात्र शुद्ध पार्दैन छालाको स्तर बढाउने काममा पनि भूमिका खेल्छ । जसले अधिक पसिना नियन्त्रण गर्न र ताजापन बढाउन पनि भूमिका खेल्छ ।